I-China iqala iphrojekthi yokunqanda ukuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba sazi, iChina inenkinga yokungcoliswa komoya okuphezulu okubangela izifo ezinkulu zokuphefumula eziphefumulayo kubo bonke abakhileyo. Ikhwalithi yomoya iphansi kakhulu futhi, kuya ngesimo sezulu samanje, amagesi amaningi agxilwe futhi ikhwalithi yomoya iyawohloka kakhulu.
Kungakho ukuthola ukuthi iziphi izihlahla ezilungele ukunciphisa ukungcola Ukufaka isandla ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu kubaluleke kakhulu eChina. Uzofunda kanjani ukuthi yiziphi izihlahla ezithandeka kakhulu?
1 Ukungcoliswa okukhulu eChina
2 Funda ukuthi iziphi izihlahla ezingcono ekushintsheni kwesimo sezulu
3 Ukungcola akuyona ukuphela kokukhathazeka
Ukungcoliswa okukhulu eChina
Umoya waseChina unezinga eliphansi kakhulu lomoya ngenxa yokuthi iningi lawo lisebenzisa amalahle njengophethiloli. Inani elikhulu lezimoto ezisakazwayo, inani eliphakeme labantu kanye nezimboni. Konke lokhu kudala ungqimba lokungcola eChina olwenza kungachazeki. Izigidi nezigidi zamaShayina kufanele ziphume nezimaski ukuze izinhlayiya ezi-2,5 micron ubukhulu zingangeni kwi-lung alveoli yazo. Lezi zinhlayiya zidala izifo ezinkulu zokuphefumula nezemithambo yegazi.
Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi iChina ifunde ukuthi iziphi izihlahla ezimunca i-CO2 kakhulu ukuze zizisakaze futhi zibe neqhaza ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu. Ukwenza lokhu, enye yezinhloso zephrojekthi eyenziwe edolobheni laseChina laseShanghai lapho kuzofakwa khona abaqaphi abazofunda izici zamahlathi wedolobha elikhulu.
Ngalezi ziteshi zokulinganisa kuzokwazi ukutadisha izinhlobo zezihlahla ezikwazi ukumunca i-CO2 eningi emkhathini. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukutadisha ukuthi iziphi izihlahla ezikwazi ukukhiqiza ama-ioni oksijini amabi kakhulu.
Funda ukuthi iziphi izihlahla ezingcono ekushintsheni kwesimo sezulu
Usolwazi waseJiao Tong University uLiu Chunjiang, Yiyona ehola iphrojekthi yokufunda izihlahla ezisebenza kahle kakhulu. Le phrojekthi izobheka ukusebenza kwamahlathi ekuphatheni isikhutha, ukukhiqiza umoya-mpilo, ukuphatha ukungcola, ukuhlanza umoya, nokugcina ukuhlukahluka kwemvelo.
Akuzona izihlahla kuphela ezisiza ukumunca i-CO2 kepha nezolimo. Kungakho ucwaningo luphinde lunqume ukuminyana nokuphakama kwezitshalo ezisebenza kakhulu ekulweni nokungcola. Kufanele futhi ucabangele ibanga okufanele ligcinwe phakathi kwezihlahla ngoba uma zithuthukisana, inani le-CO2 eliyimungayo lingancipha.
Kumele kubhekwe ukuthi indawo yokuhlala kanye nensimu kuyinto eguqukayo ebalulekile ukuze le phrojekthi iphumelele, ngoba iChina ayinakukwazi "ukusebenzisa" indawo eningi kakhulu, ngoba iyikhaya labantu abaningi emhlabeni. Imininingwane izosiza ohulumeni basekhaya baseChina ukuthi bathathe izinqumo futhi izosiza nabaphathi bamahlathi ukuphatha amahlathi abo.
Isiteshi sokuqala siqale ukusebenza ngoNovemba eZhongshan Park kanti kuhlelwe ukuthi sifakwe ezinyangeni ezimbalwa ezizayo. sezizonke iziteshi eziyi-12 zokuqapha imvelo ngenxa yale phrojekthi eyenziwe yiShanghai Jiao Tong University. Ngaphezu kwalokho, ama-monitors afakiwe anezikrini ezibonisa inani labantu ngokuhlukahluka kwesimo sezulu njengokushisa, umswakama, ukuminyana kokungcola, njll. Ngale ndlela ibuye idale ukuqwashisa futhi igcine abantu benolwazi ngesimo sekhwalithi yomoya abaphefumulayo.
Ukungcola akuyona ukuphela kokukhathazeka
Le phrojekthi ngeke ibhekele kuphela okuguquguqukayo okuthinta ukungcola kanye nokuguquka kwesimo sezulu kepha izophinda iqaphe izimo zenhlabathi namanzi kanye nezimila ngenhloso yokutadisha ukukhula kwehlathi nokuthi imvelo yehlathi ishintsha kanjani. idolobha.
Ngokuya ngemininingwane enikezwe nguLiu, ikhava lehlathi laseShanghai, elinenani labantu abasemadolobheni elinabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-30 namazinga aphezulu okungcola, bekungaba ngu-15% ngonyaka odlule kanti idolobha lihlela ukukhuphula izinga liye kuma-25% ngonyaka ka-2040.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » I-China iqala iphrojekthi yokunqanda ukuguquka kwesimo sezulu
Izikhukhula ezinkulu eYurophu zizobe zivame kakhulu ngasekupheleni kwekhulu leminyaka